ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဘက်စုံဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ ပြီးစီးခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ် | cincds
ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဘက်စုံဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ ပြီးစီးခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်
ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်အတွင်း နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ထောက်ပံ့ကူညီမှုဖြင့် နေရပ်စွန့်ခွာ ပြည်သူများအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဘက်စုံဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ ပြီးစီးခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ လေးကေ့ကော်မြို့သစ်ရှိ ဒူးပလာယာ အထက်တန်းကျောင်း ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာနမှ ဦးသိန်းဇော်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးံH.E. Mr. Maruyarma ၊ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Yohei Sasakawa ၊ KNU ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ စောမူတူးစေးဖိုး၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ဟံသာနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် အထူးဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် ပထမဦးစွာ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။ ဆက်လက်၍ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်က အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် တိုင်းရင်းသားများ၏ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး စသည့် ကိစ္စရပ်များ၌ အစိုးရအဆက်ဆက်က နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို စီမံကိန်းများ ချမှတ်ပြီး ကြိုးစား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်တွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိမှသာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အားကောင်းလာမှသာ မိမိတို့ အားလုံးမျှော်မှန်းသည့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် လေးကေ့ကော်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ ပြည်သူ၊ ၀န်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း၊ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့က စုစည်းမှု စွမ်းအားဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာနမှ ဦးသိန်းဇော်၊ KNU ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ စောမူတူးစေးဖိုး၊ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Maruyarma နှင့် နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Yohei Sasakawa တို့က အသီးသီး အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကြပြီး စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အခမ်းအနားအစီအစဉ် ဒုတိယပိုင်းအနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သည့် အဆောက်အအုံများအား ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အထိမ်းအမှတ် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ချိုးငှက်များ လွှတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင် ရွက်ခဲ့သည်။ လေးကေ့ကော်မြို့သစ် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအား နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စတင်၍ လမ်း၊ တံတားနှင့် နေအိမ် အဆောက်အအုံများ စတင်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့သည်။
နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း အနေဖြင့် နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ နေအိမ်အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းအား ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခုဆောက်လုပ်ပြီးစီးသည့် နေအိမ် ၁၀၀ လုံး အပါအ၀င် နေအိမ် ၂၀၀ လုံး ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ယခုအချိန်တွင် လေးကေ့ကော် မြို့သစ်၌ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဆောက်လုပ်ထားသည့် နေအိမ် ၂၀၀ လုံး၊ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနမှ ဆောက်လုပ်ထားသည့် နေအိမ် ၂၇၅ လုံးနှင့် အခြားနေအိမ် ၃၁၁ လုံးရှိပြီး အိမ်ထောင်စု ၇၈၆ စု၊ လူဦးရေ ၃၁၉၉ ဦးနေထိုင်လျက်ရှိသည်။ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း အနေဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ် တို့၌ ဒေသခံပြည်သူ လူထုတို့၏ လိုိအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးအတွက် ဘက်စုံ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းကို ထပ်မံအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကရငျပွညျနယျနှငျ့ မှနျပွညျနယျအတှငျး အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ ဘကျစုံဒသေ ဖှံ့ဖွိုးရေး စီမံကိနျးဆိုငျရာ အဆောကျအအုံမြား ပွီးစီးခွငျး အခမျးအနား ကငျြးပပွုလုပျ
ကရငျပွညျနယျနှငျ့ မှနျပွညျနယျအတှငျး နိပှနျဖောငျဒေးရှငျး၏ ထောကျပံ့ကူညီမှုဖွငျ့ နရေပျစှနျ့ခှာ ပွညျသူမြားအတှကျ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျလကျြရှိသော ဘကျစုံဒသေဖှံ့ဖွိုးရေး စီမံကိနျးဆိုငျရာ အဆောကျအအုံမြား ပွီးစီးခွငျး အထိမျးအမှတျ အခမျးအနားကို နိုဝငျဘာလ ၂၇ ရကျနေ့၊ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ ကရငျပွညျနယျ၊ လေးကကေ့ျောမွို့သဈရှိ ဒူးပလာယာ အထကျတနျးကြောငျး ခနျးမ၌ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့သညျ။
အဆိုပါအခမျးအနားသို့ နယျစပျရေးရာ ဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ရဲအောငျ၊ ကရငျပွညျနယျအစိုးရ အဖှဲ့ ဝနျကွီးခြုပျ ဒျေါနနျးခငျထှေးမွငျ့၊ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး (ကွညျး၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလျခြုပျကွီးမွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ အရှတေ့ောငျတိုငျး စဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူး၊ အမြိုးသား ပွနျလညျသငျ့မွတျရေးနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေး ဗဟိုဌာနမှ ဦးသိနျးဇျော၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံ သံအမတျကွီးံH.E. Mr. Maruyarma ၊ နိပှနျဖောငျဒေးရှငျး ဥက်ကဋ်ဌ Mr. Yohei Sasakawa ၊ KNU ကရငျအမြိုးသား အစညျးအရုံးဥက်ကဋ်ဌ စောမူတူးစေးဖိုး၊ မှနျပွညျသဈပါတီ ဒုဥက်ကဋ်ဌ နိုငျဟံသာနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား၊ ဖိတျကွားထားသညျ့ အထူးဧညျ့သညျတျောမြား တကျရောကျခဲ့ကွသညျ။
အခမျးအနားတှငျ ပထမဦးစှာ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး (ကွညျး၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦးက အဖှငျ့အမှာစကား ပွောကွားသညျ။ ဆကျလကျ၍ နယျစပျရေးရာ ဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ရဲအောငျက အမှာစကား ပွောကွားရာတှငျ တိုငျးရငျးသားမြား၏ ပညာရေး၊ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး စသညျ့ ကိစ်စရပျမြား၌ အစိုးရအဆကျဆကျက နယျစပျဒသေ ဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးမြားကို စီမံကိနျးမြား ခမြှတျပွီး ကွိုးစား အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျပေးခဲ့ကွောငျး၊ ပွညျတှငျး တညျငွိမျအေးခမျြးမှုရှိမှသာ ဖှံ့ဖွိုးရေး လုပျငနျးမြားကို ဆောငျရှကျနိုငျမညျဖွဈပါကွောငျး၊ ဒသေတှငျး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု အားကောငျးလာမှသာ မိမိတို့ အားလုံးမြှျောမှနျး သညျ့ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျကို အထောကျအကူဖွဈစနေိုငျမညျ ဖွဈပါကွောငျးနှငျ့ လေးကကေ့ျောမွို့သဈစီမံကိနျးကို အစိုးရ၊ တပျမတျော၊ ပွညျသူ၊ ဝနျကွီးဌာန၊ တိုငျးရငျးသား အဖှဲ့အစညျး၊ နိပှနျဖောငျဒေးရှငျးတို့က စုစညျးမှု စှမျးအားဖွငျ့ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျခဲ့ခွငျး ဖွဈပါကွောငျး ပွောကွားခဲ့သညျ။
ဆကျလကျ၍ ကရငျပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ ဝနျကွီးခြုပျ ဒျေါနနျးခငျထှေးမွငျ့၊ အမြိုးသား ပွနျလညျသငျ့မွတျရေးနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေး ဗဟိုဌာနမှ ဦးသိနျးဇျော၊ KNU ကရငျအမြိုးသား အစညျးအရုံးဥက်ကဋ်ဌ စောမူတူးစေးဖိုး၊ ဂပြနျနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Maruyarma နှငျ့ နိပှနျဖောငျဒေးရှငျး ဥက်ကဋ်ဌ Mr. Yohei Sasakawa တို့က အသီးသီး အမှာစကား ပွောကွားခဲ့ကွပွီး စုပေါငျးမှတျတမျးတငျ ဓာတျပုံရိုကျကူးခဲ့ကွသညျ။ ထို့နောကျ အခမျးအနားအစီအစဉျ ဒုတိယပိုငျးအနဖွေငျ့ ဆောကျလုပျပွီးစီးခဲ့သညျ့ အဆောကျအအုံမြားအား ဖဲကွိုးဖွတျ ဖှငျ့လှဈခွငျး၊ ငွိမျးခမျြးရေး အထိမျးအမှတျ သဈပငျစိုကျပြိုးခွငျးနှငျ့ ခြိုးငှကျမြား လှတျခွငျးတို့ကို ဆောငျ ရှကျခဲ့သညျ။ လေးကကေ့ျောမွို့သဈ တညျဆောကျရေး လုပျငနျးမြားအား နယျစပျရေးရာဝနျကွီး ဌာနအနဖွေငျ့ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ်ဍာရေးနှဈမှ စတငျ၍ လမျး၊ တံတားနှငျ့ နအေိမျ အဆောကျအအုံမြား စတငျဆောကျလုပျပေးခဲ့သညျ။
နိပှနျဖောငျဒေးရှငျး အနဖွေငျ့ နယျစပျရေးရာ ဝနျကွီးဌာနနှငျ့ ပူးပေါငျး၍ နအေိမျအဆောကျအအုံမြား ဆောကျလုပျပေးခွငျးအား ၂၀၁၈ ခုနှဈမှ စတငျဆောငျရှကျခဲ့ရာ ယခုဆောကျလုပျပွီးစီးသညျ့ နအေိမျ ၁၀၀ လုံး အပါအဝငျ နအေိမျ ၂၀၀ လုံး ဆောကျလုပျပွီးစီးခဲ့ကွောငျး သိရှိရသညျ။ ယခုအခြိနျတှငျ လေးကကေ့ျော မွို့သဈ၌ နိပှနျဖောငျဒေးရှငျးမှ ဆောကျလုပျထားသညျ့ နအေိမျ ၂၀၀ လုံး၊ နယျစပျရေးရာ ဝနျကွီးဌာနမှ ဆောကျလုပျထားသညျ့ နအေိမျ ၂၇၅ လုံးနှငျ့ အခွားနအေိမျ ၃၁၁ လုံးရှိပွီး အိမျထောငျစု ၇၈၆ စု၊ လူဦးရေ ၃၁၉၉ ဦးနထေိုငျလကျြရှိသညျ။ နိပှနျဖောငျဒေးရှငျး အနဖွေငျ့ ကရငျပွညျနယျနှငျ့ မှနျပွညျနယျ တို့၌ ဒသေခံပွညျသူ လူထုတို့၏ လိုအပျခကျြမြား ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျရေးအတှကျ ဘကျစုံ ဒသေဖှံ့ဖွိုးရေး စီမံကိနျးကို ထပျမံအကောငျအထညျ ဖျောဆောငျနိုငျရေး နယျစပျရေးရာ ဝနျကွီးဌာနနှငျ့ ဆကျလကျပူးပေါငျး ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး သတငျး ရရှိသညျ။